Xaqiiqada iyo sababta Al Shabaab u Qarxinayaan Turkiga dhisaya magaalada Muqdisho oo la ogaaday (2-Qodob) !! | Salaan Media
Laamaha ugu sareeya Sirdoonka ciidamada Dawlada iyo kuwa AMISOM ayaa helay cadeeymo buuxo oo tilmaamaya kooxda Al Shabaab oo markaan u soo jeesatay inay Qarxiyaan Masuuliyiinta Turkiga ah ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Xarakada Al Shabaab ayaa hoowlwadeenada iyo Masuuliyiinta ka socda dalka Turkiga waxaa la sheegay inay kula dagaalsan yihiin kaliyah 2 qodob oo dhanka siyaasada iyo awoodooda Shabaab wax u dhimaya.
Qodobka 1-aad : Turkiga waxa ay magaalada Muqdisho keeneen bilihii ugu dambeeyay Qalab casri ah oo lagu baaro Hubka nuucyadiisa kala duwan wuxuuna Qalabkaan aad uga wanaagsan yahay Qalabkii hore oo ay is ticmaali jireen ciidamada Dawlada iyo kuwa AMISOM.
Qalabka Hubka lagu baaro ee Turkiga uu ku soo biiriyay xarumaha Dawlada ayaa sahlaya in aan si fudud hub iyo Walxaha Qarxaha aanan loo la galin xarumaha Muhiimka ah ee Dawlada waxaana Qalabkaan cusub sidoo kale laga is ticmaalaa dalalka Yurub ugu tunka weeyn.
Qodobka 2-aad : Xarakada Al Shabaab oo dhawaan Qarxis iyo Dil ku biloowday Masuuliyiinta Turkiga ah ee ku sugan magaalada Muqdisho waxa kaloo ay aad uga soo hor jeedaan Dhismayaasha Quruxda badan iyo Mashaariicda horumarka xambaarsan ee ka socda magaalada Muqdisho kuwaas oo ay wadaan Injineero u dhashay dalka Turkiga.
Siyaasad ahaan Bilicda magaalada Muqdisho iyo Nabada ka soo iftiimeeysa, Xarakada Al Shabaab dan uguma jirto maxaa yeelay waxa ay u arkaan Guuldaro weeyn maadaama gacantii ka dambeeysay ee qabsatay magaalada Muqdisho ay gaarsiisay horumar baaxad weeyn waliba soo jiidatay Shacabka magaalada Muqdisho.
Inta badan Shacabka magaalada Muqdisho ayaa u arka xarakada Al Shabaab inay magaalada Muqdisho la doonayaan ama jeclaan lahaayeen in maalin kasta Madaafiic la isku garaaco waliba laga dhex qodo godod iyo Dhufeeysyo dagaal.